एक्सएनएक्सएक्स- 747F डाउन हुँदा कहिले सारियो?
प्रश्न एक्सएनएक्सएक्स- 747F डाउन हुँदा कहिले सारियो?
7 महिना4सप्ताह पहिले #1313 by TheFinnishDude
केही ठाडो कारणका लागि, 747 तल चलाएर चलाउछ। कसैलाई थाहा छ किन?
7 महिना2दिन पहिले #1348 by Gh0stRider203
गम्भीर प्रश्न तर तपाइँको पार्किंग ब्रेकहरू छन्?
7 महिना 1 दिन अघि -7महिना 1 दिन अघि #1350 by TheFinnishDude
हो, ब्रेक सेट यो इन्जिन सुरु गर्दा यो अगाडि फर्किन्छ। एक बिट ऊर्ध्वाधर, खराब हावाइज भनेको एयर हाउलर खेल गर्दा केही समय हो, यसले भवनको सामने विमानस्थल लोड गर्दछ। मैले पनि सुरू गर्न मौका पाएको छु, यो निर्माण गरेर नजिक पुग्छ र एउटा दुर्घटनाको कारण ... Ż __ (ツ) _ / ¯
अन्तिम सम्पादन:7महिना 1 दिन पहिले TheFinnishDude.
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.220 सेकेन्ड